About Us - Sichuan Sophisticated Scientific Instruments Co., Ltd.
Sichuan Sophisticated Scientific Instruments Co., Ltd. idivi reSichuan Anhao Zhongtai Technology Group.uye yakavambwa muna Ndira 2020. Kambani iyi iri muMianyang, kuChina sainzi uye tekinoroji guta, riri muMianyang Comprehensive Free Trade Zone, ine nzvimbo yekudyara inosvika zviuru zviviri ㎡.Iyo kambani ine zvikamu zvitatu: nzvimbo yekushambadzira, nzvimbo yekutsvagisa tekinoroji uye nzvimbo yekusimudzira, uye nzvimbo yekuvhiya, inonyanya kuita huchenjeri nekukurumidza kuongorora, tsvakiridzo yezviridzwa nekusimudzira, kupinza uye kutumira kunze kwechikafu, kuchengetedza kwezvakatipoteredza, kugadzira chikafu, kuyedza, kudzivirira denda nezvimwe. zviridzwa nemidziyo, kudzidziswa kwehunyanzvi uye masevhisi.
Mushure memakore manomwe ekuedza kusingadzoreki, yave inyanzvi yezviridzwa kambani ine imwe mukurumbira muindasitiri.Yakava muenzaniso wezviridzwa zvekuyedza mumunda wesainzi yehupenyu: chirongwa chakarurama, hukuru hwepamusoro, hunyanzvi uye nekukurumidza sevhisi.
Mazuva ano, yakagadzira hunyanzvi hwekutsvagisa nekusimudzira timu inotungamirwa naProfessor Yan Cheng uye yakavakirwa pa4 mapurofesa, uye yakaunza pamwechete 32 nyanzvi nevashandi vehunyanzvi, vachigadzira timu yebasa rehunyanzvi ine kuuraya kwakasimba uye simba.Zvino zvigadzirwa zvedu zveR & D zvepakati, senge disinfection tembiricha yekuyera chiteshi uye sefa bhegi, zvakaiswa mumusika.
Sichuan Anhao Zhongtai Technology Co., Ltd.
Nechido nerudo, tinorarama nekuomerwa nematambudziko uye tinoramba tichifambira mberi
Yakasaina chibvumirano chehurongwa neChinese Academy yeSainzi
Vakai yedu lab
Gadzira kubva musimboti pfungwa yekambani tsika
R&D centre ine vana mapurofesa
Sichuan Sophisticated Scientific Instruments Co., Ltd. yakavambwa, murabhoritari yakazvimiririra tsvagiridzo uye kuvandudzwa kweNIR spectrometer analyzer, bhegi rekubvisa mafuta uye kamuri yekuyedza.
Enda kufekitari itsva
Kuvakwa kwefekitari itsva muMianyang Free Trade Zone kwakapedzwa.
Sichuan Sophisticated Scientific Instruments Co., Ltd. inobatanidza kugadzira, kugadzira uye kutengesa.Iyo kambani inosanganisa izvo chaizvo zvinodiwa zvevatengi vepamba nevekunze kuti vagadzire yakakwana sevhisi system.
Kambani Vision: Iva kambani yebasa rehunyanzvi inovimbwa nevatengi
Basa rekambani: Tevedzera mufaro wevashandi uye ubatsire kuziva kukosha kwevatengi
Core values: hunyanzvi, mutoro, kushingirira, kubatana
Bhizinesi kufunga:Gadzira bhizinesi nekuvimbika uye tungamira kutsvaga kwehunyanzvi hwekuvandudza tekinoroji
Chinangwa cheTarenda:Kuvaka timu ine simba uye inoremekedzwa nyanzvi kuita kuti ruzivo ruve rwakakosha
Bhizinesi uzivi: Teerera kune tekinoroji-yakavakirwa, mhando-yakatarisana, uye yakatarisana nebasa
Kudyidzana pfungwa:Gadzira chikuva, kubatsirikana uye kuhwina-kuhwina mamiriro, ita shamwari pasirese
Sevhisi pfungwa: Avo vanohwina vatengi vanohwina nyika, chete izvo zvausinga funge nezvazvo, hapana chatinogona kuita
Technology ndiyo mudzi
Isu tinoteedzera pfungwa ye "tekinoroji ndiyo mudzi" uye tinovaka yakanakisa tekinoroji timu, inosanganisa indasitiri uye nyanzvi yekutsvagisa zvidzidzo.
Isu tinotevera pfungwa ye "quality-based", isu tinonyatso kudzora kunaka kwezvigadzirwa zvedu uye takazvipira kuvandudza kunaka kwemabasa edu kune vatengi vedu, kuti vagone kushandisa zvigadzirwa zvedu pasina kunetseka.
Tine huwandu hwakawanda hwezvigadzirwa zvechikafu, kuchengetedza kwezvakatipoteredza, kugadzira chikafu, kuongororwa kwebiological uye mamwe minda kusangana nezvimwe zvinodiwa.
Iyo kambani yakaisa mari yakawanda mukuvaka kwepamusoro-magumo marabhoritari, tsvakiridzo yakazvimirira uye kusimudzira zvigadzirwa zvesainzi zvekutsvagisa, uye kupa rutsigiro rwakasimba rwehunyanzvi hwechigadzirwa mushure mekutengesa.